Huawei dia mandefa "tsy misy fampitandremana" ny Huawei P8 Lite 2017 | Vaovao momba ny gadget
Huawei dia mandefa "tsy misy fampitandremana" ny Huawei P8 Lite 2017 vaovao
Vao avy nandefa ny Huawei P8 Lite 2017 vaovao i Huawei tsy misy fampandrenesana. Afaka miresaka lava momba ny maodely "Lite" an'i Huawei isika, saingy amin'ity indray mitoraka ity, izay hataontsika dia mifantoka mivantana amin'ilay maodely vaovao natolotry ny orinasa sinoa. Notanterahina tany Alemana ny fampisehoana ny vidin'ny fandefasana an'ity maodely Huawei vaovao ity dia 249 euro.
Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mampitandrina isika fa fitaovana eo anelanelany ary mahatonga antsika hafahafa ny mahita ny anarana P8 Lite indray rehefa efa manana ny P9 Lite isika, saingy io no fanavaozana ilay maodely natolotra tamin'ny 2015 izy io ary izany no mahatonga antsika manampy ny taona amin'ny anarana.
Mba hanomezana anay hevitra momba ireo masontsivana avelantsika hiaraka aminay latabatra fampitahana kely misy fahasamihafana kely eo amin'ireo maodely farany misy ny fanondroana Huawei Lite:
efijery 5.2 santimetatra 5 santimetatra 5.2 santimetatra
vahaolana 1.920 × 1.080 teboka 1.280 × 720 teboka 1.920 × 1.080 teboka
processeur Kirin 655 Kirin 620 Kirin 650
Efitra lehibe 12 MP 13 MP MP 13
Fakan-tsary eo aloha MP 8 MP 5 MP 8
ID ny famandrihana Eny tsy misy Eny
bateria 3.000 Mah 2.200 Mah 3.000 Mah
Dual-SIM Eny Eny Eny
LTE, NFC, microSD Eny Eny Eny
Tena manaitra tokoa rehefa mijery ny masontsivana isika ary mahita fa ny efijery dia mitovy amin'ny maodely P9 Lite, 5,2 santimetatra miaraka amin'ny fanapahan-kevitra Full HD ary manana processeur somary matanjaka kokoa noho ny maodely hafa ao anatin'izany ny P9 Lite, ny Kirin 655 izay mametraka ny Honor 6X vaovao aseho ao amin'ny CES any Las Vegas. Normal io satria miatrika maodely vaovao isika, fa gaga izahay fa misy fakan-tsary tsy misy MP kely dia tafapetraka ao amin'ny fakantsary lehibe amin'ireo ekipa ireo raha oharina amin'ny ambiny.
Mazava ho azy izy io dia maodely Huawei vaovao misy anarana taloha ary noho izany dia tsy maintsy mitandrina isika mba hanavahana azy tsara amin'ny fotoana hanombohana ny fividianana. Na izany na tsy izany, ny Huawei vaovao dia amidy any Alemana ary amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra na ho vidiana any Espana na tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Huawei dia mandefa "tsy misy fampitandremana" ny Huawei P8 Lite 2017 vaovao
Mbola tsy navaozina ho Windows 10 ve? Mbola azonao atao maimaim-poana
Manomboka maty ny FM Radio, mpisava lalana amin'ny fanapahana entona entona i Norvezy